Isaziso sezomthetho kunye neemeko zokusetyenziswa Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
1 Isaziso esisemthethweni kunye neemeko zokusetyenziswa
1.1 Injongo yale webhusayithi
1.2 Ukusetyenziswa kwewebhu
1.3 IiMfanelo zoMsebenzisi
1.4 Ukukhuselwa kwedatha kunye noMgaqo-nkqubo wokugcinwa kwemfihlo
1.5 Umsebenzi wamalungelo we-ARCO
1.7 Amalungelo obunini bemizi kunye nepropathi yamashishini
1.8 Amakhonkco angaphandle
1.9 Ukukhutshelwa ngaphandle kwesiqinisekiso kunye noxanduva
1.10 Umthetho osebenzayo kunye noMthetho
• Igama lenkampani yile: Kwi-Intanethi ye-servicios Telemáticos SL
Iofisi ebhalisiweyo ikwiC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230-Albolote (eGranada)
Xa usebenzisa iwebhusayithi fumanisa kwi-intanethi, uMsebenzisi uyavuma ukuba angaziphathi ngendlela enokuthi yonakalise umfanekiso, umdla kunye namalungelo okufumanisa kwi-intanethi okanye umntu wesithathu okanye onokonakalisa, ukukhubaza okanye ukulayisha ngaphezulu iwebhusayithi. kwi-intanethi okanye eya kuthintela, nangayiphi na indlela, ukusetyenziswa kwesiqhelo kwewebhu.
Discover.online yamkela amanyathelo okhuseleko afanelekileyo okufumanisa ubukho beentsholongwane. Nangona kunjalo, uMsebenzisi kufuneka aqonde ukuba amanyathelo okhuseleko kwiinkqubo zekhompyuter kwi-Intanethi awathembekanga ngokupheleleyo kwaye, ke, ukufumanisa. (isoftware kunye nezixhobo) zoMsebenzisi okanye kumaxwebhu e-elektroniki kunye neefayile eziqulethwe apho.
• Gcina, upapashe kunye / okanye udlulise idatha, iitekisi, imifanekiso, iifayili, amakhonkco, isoftware okanye nayiphi na into engathandekiyo ngokwemiqathango esemthethweni, okanye ngokokuqikelela kwe-Discover. I-vulgar, amanyala, ubuhlanga, u-xenophobic okanye enye into ephikisayo okanye engekho mthethweni okanye enokubangela ukwenzakala kwalo naluphi na uhlobo, ngakumbi amanyala.
Njengomsebenzisi, uxelelwe ukuba ukufikelela kule webhusayithi akuthethi, nangayiphi na indlela, ukuqala kobudlelwane bezentengiselwano kunye ne-Online servicios Telemáticos SL ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, iinkonzo zayo kunye neziqulatho ngaphandle kokuchasana umthetho wangoku, ukholo olulungileyo kunye nocwangco loluntu. Kuvumelekile ukusebenzisa iwebhusayithi ngeenjongo ezingekho mthethweni okanye eziyingozi, okanye ukuba, nangayiphi na indlela, inokubangela ukonakala okanye kuthintele ukusebenza okuqhelekileyo kwewebhusayithi.
I-servicios ye-Intanethi ye-Intanethi Telemáticos iqinisekisa ukugcinwa kwemfihlo yeenkcukacha zobuqu ezinikezwe ngabakwa-USERS kunye nonyango lwabo ngokuhambelana nomthetho okhoyo ngokukhuselwa kwedatha yobuqu, ekubeni wamkele amanqanaba okhuseleko kukhuseleko lweenkcukacha ezifunekayo zomntu.
I-Online servicios Telemáticos SL izibophelele ekusebenziseni idatha ebandakanyiweyo kwifayile "Abasebenzisi be-WEB kunye ne-SUBSCRIBers", ukuhlonipha imfihlo yabo kwaye bayisebenzise ngokuhambelana nenjongo efanayo, kunye nokuthobela uxanduva lwabo lokusindisa kunye nokulungelelanisa konke amanyathelo okuthintela utshintsho, ilahleko, unyango okanye ukufikelela okungagunyaziswanga, ngokungqinelana nemigqaliselo yoMmiselo weRoyal 1720/2007 ye-21 kaDisemba, evuma iMigaqo yokuqulunqwa koMthetho oManyeneyo 15/1999 we-13. NgoDisemba, uKhuseleko lweDatha yoBuntu.
Umsebenzisi unokusebenzisa, ngokubhekisele kwidatha eqokelelweyo, amalungelo amkelwe kwi-Organic Law 15/1999, yokufikelela, yokulungisa okanye ukucinywa kwedatha kunye nenkcaso. Ukusebenzisa la malungelo, umsebenzisi kufuneka enze isicelo esibhaliweyo kunye nesayinwe ukuba angathumela, kunye nefotokopi yesazisi okanye uxwebhu olufanayo lokuchonga, kwidilesi yeposi ye-Online Servicios Telemáticos SL (Oko kukuthi, iC / Blas de Otero no16 1º Iz. -18230 -Albolote (eGranada)) okanye nge-imeyile, iqhotyoshelwe ifotokopi yesazisi ku: info (at) discover.online. Ngaphambi kweentsuku ezili-10, isicelo siya kuphendulwa ukuqinisekisa ukuphunyezwa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
I-Online servicios Telemáticos SL yazisa ukuba kukho iifom zesikhalazo ezikhoyo kubasebenzisi nakubathengi.
Umsebenzisi unokwenza amabango ngokucela ifom yebango okanye ngokuthumela i-imeyile kulwazi (kwi) fumanisa kumnxeba obonisa igama lakho nefani, inkonzo okanye imveliso ethengiweyo kwaye ichaza izizathu zebango labo.
Ungalihambisa ibango lakho ngeposi kule dilesi: I-Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 -Albolote (eGranada) usebenzisa, ukuba unqwenela, le fomu yebango ilandelayo:
Iya kuthathelwa ingqalelo: Kwi-Intanethi servicios Telemáticos SL
C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 -Albolote (eGranada)
I-imeyile: ulwazi (kwi) fumanisa kwi-intanethi
Ngale miQathango Jikelele, akukho malungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye oshishino ogqithiselwe kwiwebhusayithi fumanisa kwi-intanethi ipropathi enomgangatho ophucukileyo eyeyakhe kwi-Intanethi. , ukukhupha, ukusetyenziswa kwakhona, ukugqithisela okanye ukusetyenziswa kwayo nayiphi na imeko, ngayo nayiphi na indlela, okanye nayiphi na, ngaphandle kwaxa kuvunyelwe ngokusemthethweni okanye kugunyaziswe ngumnini wamalungelo ahambelanayo.
Kwimeko apho umsebenzisi okanye umntu wesithathu ethathela ingqalelo ukuba kuye kwakho ukwaphulwa kwamalungelo abo okuthengiswa kwepropathi esemthethweni ngokungenisa umxholo othile kwiWebhu, kufuneka bazise imeko enjalo kwi-Intanethi ye-servicios Telemáticos SL ebonisa:
Iinkcukacha zomntu obandakanyekayo onamalungelo otyholwa ngokwaphula umthetho, okanye abonise into ayenzayo xa ibango lakhe lisiwe ngumntu wesithathu ngaphandle komntu onomdla.
I-servicios ye-Intanethi ye-Intanethi Telemáticos SL iyala naluphi na uxanduva ngokubhekisele kulwazi olungaphandle kwale Web, kuba umsebenzi weekhonkco ezibonakala kuphela kukwazisa uMsebenzisi ngobukho beminye imithombo yolwazi kwisihloko esithile. I-Online servicios Telemáticos SL ikhululiwe kulo naluphi na uxanduva ekusebenzeni ngokufanelekileyo kwezi khonkco, isiphumo esifunyenwe kwiikhonkco ezichaziweyo, ubunyani kunye nomthetho womxholo okanye ulwazi olunokuthi lufikeleleke, kunye nomonakalo onokuthi ubonakale Umsebenzisi ngenxa yolwazi olufumaneka kwiWebhu edibeneyo.
I-Online servicios Telemáticos SL ayinikezeli nasiphi na isiqinisekiso kwaye ingenatyala, nangaluphi na uhlobo, kumonakalo walo naluphi na uhlobo olunokubangela:
Ngokubanzi, ubudlelwane phakathi kokufumanisa i-intanethi kunye nabasebenzisi beenkonzo zayo ze-telematic, ezikhoyo kule webhusayithi, zixhomekeke kwimithetho yaseSpain nakulawulo nakwiinkundla zaseGranada.
Kwimeko apho nawuphi na uMsebenzisi enayo nayiphi na imibuzo malunga nesi saziso somthetho okanye naluphi na uluvo malunga newebhusayithi fumanisa kwi-intanethi, banokuya kulwazi (kwi) fumanisa.
I-Discover.online inelungelo lokuguqula, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso sangaphambili, intetho kunye noqwalaselo lwewebhusayithi fumanisa kwi-intanethi, njengale saziso somthetho.
Indlela yokoyisa isono ngokutsho kweBhayibhile?
Indlela yokoyisa isilingo ngokwebhayibhile
Kutheni isishumi sibalulekile?